Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1598
Par Taratra sur 06/02/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Nikatona ny ankamaroan’ny magazay. Tapaka nandritra ny ora vitsivitsy ny lalana. Horakoraka, hikiaka, fivelesana koveta lovia, vilany…, miampy filanjana sorabaventy. Izany no hetsika goavana nataon’ireo mpivarotra amoron-dalana marobe, tetsy Analakely, izay efa nahiana hivadika hetsi-bahoaka mihitsy, omaly. Tsy nahovoka, na tsy sahy nihetsika firy ny Emmo/Reg… Niavaka ! Tsy toy ny fanenjika sy fangalapiery mahazatra […]
Par Taratra sur 05/02/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Tafita hiatrika ny famaranana, amin’ny andiany fahefatra amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Chan 2016), taranja baolina kitra, ny Leopard avy any amin’ny RD Kongo. Resiny, teo amin’ny manasa-dalana, tamin’ny alalan’ny fandakana ny «tirs au but», 5 noho 4, ny Syli Nacional avy any Ginea, ny alarobia lasa teo. Anisan’ny nanavotra ny Kongoley, i Ley […]
Kitra Analamanga : mpilalaon’ny Uscafoot IFC 9 horoahina
Mandalo fotoan-tsarotra ny kitra eto Analamanga, ankehitriny. Klioba roa anisan’ny mifaninana amin’ny fiadiana ny ho tompondaka no misedra olana. Eo ny Uscafoot IFC, tompondaka, sy ny Vesta Team FC. Nanomboka, omaly, ny fifaninanana hiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga, taranja baolina kitra. Betsaka ireo klioba mandalo fahasahiranana, ka mety tsy hahatanteraka, hatramin’ny farany na mety hanao […]
Zotra 194 : hajaina ny lalàn’ny fifamoivozana
Par Taratra sur 05/02/2016 Economie, NS Malagasy
Nihaona tetsy Ambodivona, ny alarobia teo, ny tompon’andraikitra ao amin’ny polisim-pirenena sy ny kaoperativa Mirindra, misy ny zotra 194. Nahatonga ny fotoana ny fametrahana fifanajana sy ny fanarahan-dalàna mikasika ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra. Tsiahivina fa nisy lozam-pifamoivoizana, andro vitsy lasa izay, nandonan’ny fiara zotra 194 polisy nitarika manam-pahefana teny amin’ny lalana Vahilava (route digue). Nitarika […]
Par Taratra sur 05/02/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Ho avy tsy ho ela ny fanamarihana ny « Andro iraisam-pirenena ho an’ny teny reny ». Mankalaza io tsy tapaka i Madagasikara. Sehatrasa, fikambanana, sampandraharaha isan-tokony, sns, samy manatanteraka « hetsika » avokoa. Tsy manalavitra azy ireny ny manampahaizana sy ny avara-pianarana. … Mikaroka, mandany rondoha sy vola aman-karena, mihafy, kanefa toa sasa-poana ihany noho ny antony samihafa. Goavana […]
Ako Miantefa : hovelarina ny tontolon’ny sary sy ny mozika
Tsy ampy intsony ny filazana fa difotry ny kolontsaina vahiny ny kolontsaina malagasy. Handray andraikitra manandrify azy ny Ako Miantefa, fikambanana ivondronana teknisianina amin’ny mozika sy sary (mpampianatra, mpitahiry, mpanao sary, mpitendry zavamaneno, mpahay tantara, sns). « Hovelarina ny tontolon’ny sary sy ny mozika. Asa maromaro no hatao. Anisan’izany ny fampianarana ireo taranjan-javakanto roa ireo », hoy […]
Hetsika miavaka amina toerana miavaka. Izay no tanjona amin’ny “Smooth Night Love”. Hamerina ireo hiram-pitiavana malaza ireo mpanakanto nosafidina manokana. Hetsika miavaka amin’ny lafiny maro. Tanjon’ny Ivenco izany ho an’ny “Smooth Night Love”. Hotontosaina ny 13 febroary izao manomboka amin’ny 8 ora alina izany. Hampiavaka voalohany ny hetsika ny toerana hanatontosana azy. Nosafidiana manokana […]
Par Taratra sur 05/02/2016 En Bref, NS Malagasy
Silo, etsy amin’ny Piment Café Behoririka Hiverina an-tsehatra indray ny trio Silo. Rehefa nijanona volana maromaro, manome fotoana ireo mpankafy etsy amin’ny Piment Café Behoririka indray i Silo anio, manomboka amin’ny 9 ora alina, Christelle Ratri ary Cedrick. Noho i Christelle tera-bao, sy i Silo tsy teto an-tanindrazana no tena anton’ny fitsaharana fohy. Ankoatra ireo […]
Fiarovana ny natiora : hamoaka ny « Hazo kely » i Seheno
Na tsy fantatra loatra aty an-tanindrazana aza, misy mpanakanto malagasy, any ivelany any, mametraka ny maha izy azy ary mizotra mankany amin’ny fahombiazana amin’izany lalana nosafidiny izany. Anisan’ireny i Seheno, tovovavy manan-talenta monina any Pantin Frantsa. Mifototra tanteraka amin’ny tontolo iainana, ny voajanahary ary ny fandriampahalemana sy ny fitoniana ny aingam-panahiny. Izay no mampiavaka an’i […]
Ambanidia : tratran’ny polisy ny lehilahy iray nisandoka ho zandary
Par Taratra sur 05/02/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Noraisim-potsiny! Nidoboka avy hatrany eny amin’ny fonjan’Antanimora, omaly rehefa avy natolotra ny fampanoavana ny lehilahy iray nisandoka ho zandary tratran’ny polisy avy ao amin’ny Boriborintany faharoa eny Ambohijatovo… Voasambotry ny polisy teny Ambanidia, afakomaly ity zandary sandoka ity. Araka ny fanazavan’ny polisy, nisakafo tao amin’ny hotely iray eo Ambanidia ary efa somary mamomamo izy […]
Jao’s Pub : hiverina i Vaiavy Chila
Naharitra ela ny fihodinana nataon’i Vaiavy Chila tany amin’ireo Nosy manodidina, indrindra ny tao Mayotte ny volana desambra lasa teo. Vantany vao nigadona teto an-tanindrazana, tonga dia nantao ny fitetezam-paritra tany Analanjirofo izy sy ny tariny tamin’iny volana janoary iny. Fantatra kosa izao fa manome fotoana ireo mpankafy azy eto Antananarivo indray ity mpanjakavavin’ny “salegy […]
Ny talata teo, nanapa-kevitra ny tompon’andraikitra ao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra fa hatsahatra amin’ny asany ireo mpiasa manana fifanaraham-piaraha-miasa ao anatin’ny fotoana fohy (ECD). Mahatratra 200 mahery ireo mpiasa naato amin’ny asa ireo. Voalazan’ny tatitra fa noho ny fandaminana tsy maintsy atao eo amin’ny kaominina no anton’izao fampitsaharana ny mpiasa marobe amin’ny asa izao. Nambara […]
Famindram-pahefana tamin’ny Kly Ratsimandrava : latsaka an-katerena ny fitondrana jeneraly Ramanantsoa
Par Taratra sur 05/02/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Raharaha Ratsimandrava. 41 taona lasa izay! Latsaka an-katerena ny fitondran’ny jeneraly Ramanantsoa… 41 taona katroka, anio, ny nanoloran’ny filoham-panjakana sady lehiben’ny governemanta, ny jeneraly Ramanantsoa Gabriel, ny fahefana feno hitondra ny tany sy ny fanjakana tamin’ny kolonely Ratsimandrava Richard, teny amin’ny toby Ampahibe, ny 5 febroary 1975. Antony, latsaka an-katerena tanteraka ny firenena. “Ny zavatra […]
Hifamotoana eny Imerinkasinina, hamboly hazo ny eo anivon’ny antoko Tim, rahampitso asabotsy tontolo andro. Sambany indray ny fiarahan’izy ireo amin’ny filoha teo aloha, amin’ny fambolen-kazo tahaka izao raha notarihin’ireo lohandohany ihany ny Tim tamin’ny fanaovana izany adidy izany. Efa teto ihany ny filoha nasionaly, Ravalomanana tamin’ny taon-dasa, saingy tsy afa-niteny sy narahi-maso akaiky. Hanao ny […]
Ampasikobo-Toliara : rongony 5 kg sy sasany saron’ny polisy
Saron’ny polisy misahana ny zava-mahadomelina tao an-tranon’ny lehilahy iray ao Ampasikibo Toliara, ny alarobia teo ny rongony 5 kg sy sasany. Ny ankamaroan’ireto rongony ireto, hatao tahiry efa vonona hovolena fa ny sasany kosa hamidy. Araka ny fanadihadiana natao tamin’ity voarohirohy ity, 20 000 Ar ny vidin’ireto rongony ireto ka 200 Ar ny iray fonosana rehefa […]
Hisokatra amin’ny 2017 ny radiothérapie-n’ny fanjakana
Manomboka mahazo vahana ny homamiadan’ny havokavoka sy ny tsinay, ary ny taova rehetra amin’ny lalan-kanina amin’izao fotoana izao, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny sampana misahana ny fitsaboana ny homamiadana ao amin’ny HJRA, Rabarijaona Léontine, omaly, teny Anosy. Antony miteraka izany ny fomba fiainan’ny mponina amin’ny ankapobeny. Manampy trotraka ny rivotra iainana sy ny setroka samihafa ka […]
« Précédent 1 … 1 596 1 597 1 598 1 599 1 600 … 1 629 Suivant »